CIRAAQ: TALOOW MAXAA LOO CUSKADAY QABSASHADII CIRAAQ
Tarjumadii: Ibaraahim Saalax | SomaliTalk Denmark | Apr 22, 2003
Duullimaadkii ay ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska ay ku qaadeen Ciraaq ayaad mooddaa inuu soo afjarmayo. Maamullada Washington iyo London waxay halqabsi duulaankooda uga dhigteen dagaalka ka hor “waxaan ka hortagaynaa hubka sida daran wax u gummaada ee uu haysto Saddaam” iyo “Saddaam wuxuu halis ku yahay nabadda dunida”. Hadalladaasi maxaa iska beddelay, kadib markii ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska ee ku soo duulay Ciraaq ay qabsadeen dhammaan magaalooyinka Ciraaq.
Haddaba, iyadoo laga joogo wax ka badan bil iyo usbuuc muddadii ay ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska ku qabsadeen Ciraaq ayaa dad badani is weydiinayaan inay Mareekanka iyo Ingiriiska ay gacanta ku dhigeen hubkii khatarta ahaa ee lagu eedaynayay maamulka Saddaam. Wargayska maalinlaha ah ee Independent ee ka soo baxa dalka England ayaa cadadkiisii shaleey ka dalbaday dowladda UK guddi ka socda baarlamaanka inuu dabagal ku sameeyo qodobbadii ay dowladda Britain u cuskatay in dagaal lagu qaado Ciraaq.
Dhinaca kale, wuxuu wargaysku ku tilmaamay caddeymihii ay dowladda Britain hadda kahor soo bandhigtay inay ahaayeen kuwo la “fabrikeeyay” oo aan wadan wax daliil ah. Wargayska Independent oo su’aal toos ah weydiinaya Ra’iisal wasaaraha Britain Tony Blair ayaa wuxuu yiri “aaway hubka sida daran wax u gummaada ee ay sheegayeen Bush iyo Tony Blair inay yaaliin Ciraaq si ay markaasi marmarsiiyo uga dhigtaan dagaalka Ciraaq?, Bil iyo usbuuc ayaa laga joogaa duulimaadkii lagu qaaday Ciraaq, ilaa waqtigan hadda ah kuma aynan guuleysan ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska tilmaan cad oo sheegaysa inay Ciraaq haysato hubka sida daran wax u gummaada”.
Wargayska oo sii wata hadalkiisa ayaa markale yiri “dunida ma illoobi doonto tilmaamaha la fabrikeeyay ee uu xooghayaha arrimaha dibadda ee Mareekanka Collin Powel uu soo hor dhigay gollaha ammaanka muddo hadda laga joogo labo billood, isagoo xujooyinkiisa u adeegsaday sawiro laga soo duubay dayax gacmeedyo iyo codad laga duubay taleefoono, isagoo arrintan daliil ugu raadinaya inay Ciraaq haysato hubka halista ah ee sida daran wax u gummaada”. Wuxuu misna wargayska weydiiyay Powel su’aashan “hadda oo ay ciidamada Mareekanka iyo Ingiriiska qabsadeen Ciraaq halkee mareen hubkii lagu eedaynayay Ciraaq”.
Sidoo kale, waxaa isla shaleey arrintan oo kale wax ka qoray Wargayska The Observer ee ka soo baxa England, wuxuuna wargayska isagoo warbixintiisa ka soo xiganaya dowladda UK sheegay in arrinta hub baarista Ciraaq loo xil saarayo dal saddexaad sida dalka Holland. Hase ahaatee, wargayska The Observer ayaa intaasi raaciyay inay weli socdaan doodaha ku saabsan dalkii dabagalka ku sameyn lahaa ka sal-gaarka inay Ciraaq haysatay hubka halista ah iyo inkale. Wuxuu kaloo wargayska shaaca ka qaaday inay u badan tahay in la fogeeyo dowrka Qaramada Midoobay ee ku saabsan hub baarista Ciraaq. Mar aan sii fogeyn ayeey xukuumadda Washington sheegtay in wixii hadda ka danbeeya uusan madaxa hub baarayaasha ee QM Hans Blix iyo shaqaalaha kale ee la shaqeeya aan loo xilsaari doonin howlaha hub baarista ee Ciraaq.
Wargayska The Observer ayaa intaas raaciyay in usbuucii la soo dhaafay la magacaabay ilaa 1000 hub baarayaal ah oo isugu jira mareekan iyo ingiriis, kuwaasoo sida uu wargayska tibaaxay ka howlgali doona ilaa 150 goobood oo ka mid ah Ciraaq.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah inay jiraan damacyo badan oo maalinba maalinta ka danbeysa soo shaac baxaya, kuwaasoo dhammaantood isugu soo biyo shubanaya ka faa’iidaysiga batroolka Ciraaq iyo inay ciidamada duulaanka ay Ciraaq ka dhigtaan bar tilmaameedyo istiraatiijiyeed arrimaha barriga dhexe.
Ka bixi mayno Ciraaq
Sida ay dad badan oo u kuurgala siyaasadda ay saadilanayaan, aad ayeey u adag tahay inay si weyn uga lug baxaan ciidamada Mareekanka dalka Ciraaq, waxaana tilmaan cad u ah hadallada ka soo yeeraya marba marka ka danbeeya madaxda Mareekanka.
Senator-ka jamhuuriga ee Mareekanka Pat Roberts ahna madaxa guddiga sirdoonka ee gollaha shuyuukhda mareekanka ayaa shaleey u sheegay taleefishinka Fox News inay ciidamada Mareekanka ay weligood joogi doonaan Ciraaq, wuxuuna sidoo kale tilmaamay in Mareekanka laga doonayo inay ku fidaan guud ahaan gobolka barriga dhexe. “waxaan u nimid inaan joogno” ayuu yiri mar uu ka hadlayay taleefishinka Fox News, wuxuuna intaasi raaciyay “waxaan xasuustaa markii uu uu madaxweynaha Bill Clinton oranayay waxay ciidamada mareekanka joogayaan waddamada lagu magacaabo “+Balkans”ka (yuguslaafiyadii hore) muddo sannad ah, saas oo ay tahay ilaa hadda ciidamadeenam gaaraya 10-ka kun way joogaan, waxaana muddadaas ka soo wareegatay muddo dhan 10 sanno” ayuu yiri isagoo sheegay in sidaas si la mid ah iyo ka badanba ay joogi doonaan ciidamada Mareekanka Ciraaq iyo guud ahaan gobolka barriga dhexe.
Sidaas si la mid ah hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee Ciraaq Jay Garner ayaa shaleey Wargayska Washington Post u sheegay inayan jirin muddo cayiman oo uu ku soo xirmayo maamulkiisa ku meel gaarka ah ee Ciraaq, hase ahaatee wuxuu daboolka ka qaaday inay maamulka wareejinayaan markii ay u diyaar garoobaan shacabka Ciraaq maamulka dalka. “waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nidaam dimuqraadi ah oo shacabka u suurto gelinaysa inay samaystaan waxa shacabka raalli gelinaya” ayuu yiri Jay Garner oo 64 jir ah, aadna ay cilaaqo fiican u leeyihiin wasiirka gaashaandhiga Mareekanka ee Donald Rumsfeld. Jay Garner ayaa maanta soo gaaray caasimadda Ciraaq ee Baghdaad, isagoo booqday goobo ay ka mid yihiin cusbitaalka iyo warshadda biyaha sifeesa iwm.
EEG QORAALADII HORE EE IBRAAHIM SAALAX